शितगङ्गा नगरपालिका वाड न. २ सरस्वती मा.बि.सितापुरमा ७० सैयाको क्वारेन्टाइन स्थापना
झनक केसी ,सितगंगा।
जेष्ठ ५ ,अर्घाखाँचीबुलेटिन -शितगंगा नगरपालिकामा वडा न. २ मा बसेको सर्वपक्षिय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढीरहदा शितगगा नगरपालिकामा पनि अति उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आज शितगंगा नगरपालिकामा वडा न. २ ले सरस्वती माध्यमिक बिद्यालयमा ७० शैयाको क्वारेन्टिन निर्माण गरेको छ ।
आबस्यक परे अन्य ठाउमापनि थप क्वारेन्टाइन ब्यबस्थापन गर्ने यसै वाडका अध्यक्ष गोबर्धन थापाले जानकारी दिएका छन। यो संगै आज बसेको सर्बपक्षिय बैठकले कोरोनाकै बिषयमा निर्णय गरेको छ । वडाको अनुमति बिना भारत लगाएर अन्य मुलुकबाट कुनै वडा नगरपालिका वा जिल्लाबाट आएको खण्डमा यस वडाको नियमै बसेर अनिबार्य रुपमा वडाले तोकेको क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने छ ।
भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरु वडा अथवा नगरपालिकामा सम्पर्क गरी क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने छ। यदि सम्बन्धीत निकायमा सुचना नगरी सीधै घर गएमा परिवारका सम्पुर्ण सदस्य सहित आपनै खर्चमा क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने छ।
यदि नियमहरु पालना नगरेको खण्डमा नियम अनुसार कडा भन्दा कडा कारबाहि हुने र भारत तथा अन्य स्थानबाट आएमा मोबाइल न. ९८५७०६९४०२ मा सिधै सम्पर्क गर्न वडा अध्यक्ष गोबर्धन थापाले अनुरोध गर्नु भयो।